ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရရှိအောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကျမလဲ? | Mycanvas
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရရှိအောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကျမလဲ?
“ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးကြီး မတွေးတတ်ရင် ကိုယ့်ကို တခြားလူတစ်ယောက်က အထင်ကြီးဖို့ မျှော်လင့်လို့ မရပါဘူး။”
1. သင်၏ထူးခြားမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ပါ သင်ဟာ အများထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိပါစေ။ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သင်နဲ့တူတဲ့လူမရှိဘူး။ သင်နှင့်တူသော အရည်အချင်းများ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ သို့မဟုတ် ရှုထောင့်တစ်ခုမှ သင်နှင့်တူသည်ဟူ၍ မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီသည် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိရာတခုထဲအရာကိုအာရုံစိုက်ပါက၊ အများနှင့် နှိုင်းယှဥ်ခြင်း၊ မနာလိုခြင်း သို့မဟုတ် နောင်တရခြင်းများမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
2. အကောင်းဆုံးကို ပေးပါ။
သင်အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့အခါ သင်ကိုယ်တိုင်က ကောင်းကောင်းခံစားရပြီး သင်လုပ်သမျှမှာ ယုံကြည်မှုက တိုးလာစေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်အား အန္တရာယ်များကို ရှောင်လွှဲရန် သို့မဟုတ် သင့်အား သက်တောင့်သက်သာ ဇုန်မှ ထွက်ခွာရန် မကြောက်ဘဲ ကြီးမားသော ယုံကြည်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေ ရှိတယ်။ သင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ သင်ရဲ့သန္နိဋ္ဌာန်ကို ခိုင်ခံ့အောင်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေအဖြစ် သဘောထားပြီးတော့ ဇွဲရှိပါ။
4. ဒုက္ခကို ကျော်လွှားပါ။
အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားကောင်းစေပါတယ်။ အကြီးကျယ်ဆုံးသော သီချင်းများ၊ အနုပညာလက်ရာများနှင့် စာပေလက်ရာများသည် စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အချည်းနှီးသော နက်နဲမှုတို့ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသူများမှ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို တွေ့ကြုံခံစားရပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ကျော်တက်လာခြင်းသည် မျှော်လင့်ချက်နှင့် အောင်ပွဲများ တိုးပွားစေသည်။
5. တစ်ခုခုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။
သင့်အတွက် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ပြီး ၎င်းတို့ရောက်ရှိရန် သင့်ကိုယ်သင် တွန်းအားပေးပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို သိလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အောင်မြင်ပါစေ။ ကျွမ်းကျင်သော အတွေ့အကြုံများသည် အောင်မြင်မှုရရှိရန် အလို့ငှာ သင်အားသွန်ခွန်စိုက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်ကို သင်သိသည့်အရာများဖြစ်သည်။
6. သင့်ကိုယ်သင် အဖြစ်အပျက်နှင့် ခွဲထုတ်ပါ။
သင်ဟာ သင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာမဟုတ်သလို အခြားသူတွေ သင့်ကိုမြင်ပုံအပေါ် သင်ယုံကြည်ပုံလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင့်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို သင်မသတ်မှတ်ထားသလို အခြားသူများကလည်း သင့်အား မည်သို့မြင်ပုံဖြင့် သင်သတ်မှတ်မထားပါ။ သင်က စရိုက်လက္ခဏာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။
7. မင်းရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေသော မည်သည့်အရာမှ မရှိပါ။ လူတိုင်းသည် အချိန်အမျိုးမျိုးတွင် ကြောက်ရွံ့မှုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများဖြစ်သော်ငြား သတ္တိရှိရှိဖြင့် စရိုက်လက္ခဏာကို ခိုင်ခံ့စေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်သည်။ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကြောက်ရွံ့ပါက၊ လူမှုရေးပွဲများ စသည်တို့ကို တက်ရောက်ပါ။ – အိမ်မှာနေပြီး စိတ်မပူပါနဲ့။ လုပ်တာက ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြေအနေအသစ်တွေမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ် အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ သင်ပိုလုပ်လေလေ သင်ပိုကောင်းလာလေလေ၊ ထို့ကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရလေလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။
8. ရုပ်ရည်ချောမောခြင်းသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနှင့် တူညီခြင်းမရှိပါ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလူအချို့သည် လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိကြပေ။ Marilyn Monroe သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှပဆုံး၊ အလှပဆုံးလူများထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော်လည်း အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပုံရိပ်မရှိပေ။ သူမသည် အခြားသူများ၏ခွင့်ပြုချက်ကဲ့သို့သော ပြင်ပအချက်များအား လွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်၍ မိမိကိုယ်မိမိတန်ဖိုးထားမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရုပ်ရည်ကောင်းခြင်းက သင့်ကိုယ်သင် ခဏတာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပေမယ့် လုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။
9. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပုံဖော်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုကလွဲလို့ မရပါဘူး။ ဒါက မင်းရဲ့ရုပ်ရည်ကို တခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာတော့ မတူပါဘူး။ မင်းနဲ့အဆင်ပြေနေမှပဲလေ။ လူတိုင်းဟာ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး ဝတ်ကောင်းစားလှနဲ့ ကျန်းမာနေချိန်မှာ ကြည့်ကောင်းကြပါတယ်။
10. သင့်ကိုယ်သင် အားပေးသော စကားပြောနည်းကို လေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှိမ့်ချသောအခိုက်အတန့်များ၊ သံသယစိတ်များ၊ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် မသေချာမရေရာမှုများရှိသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပြန်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို လေ့လာရမယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူတိုင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော အခိုက်အတန့်များကို ဖြတ်သန်းရကြောင်း နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အတိတ်က အောင်မြင်မှုတွေကို မှတ်မိဖို့၊ လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကို မြင်ယောင်ပြီး အဲဒါကို ဆက်လုပ်ပါ။ အလေ့အကျင့်သည် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။
ကြိုးစားမှုတိုင်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရန် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သင်လုပ်၊ သင်ယူ၊ ပြီးမြောက်အောင်၊ မြဲမြံစွာ သင်ယူခြင်းဖြင့် သင်ယူပါ။